Pregnancy Program - Quit Partner
Iskaga Jooji Habkaaga Barnaamijka Uur Lahaanta
Caawimaad Haddii aad Uur leedahay ama aad Qorshaynayso inaad Yeelato
Waxaan fahamsanahay in la qabsiimada nikotiinka uu san kaaga tageynin haddii aad uur leedahay ama aad qorsheyneyso inaad yeelato. Taageeradeena bilaa xukunka ah aya kaa caawin karta inaad iska joojiso adigoon ku darin walwalka ah inaad dhasid cunug. Markaad barnaamijka ku jirto, waxaa lagugu lammaanaynaya tababare dumar ah oo loo tababaray inay ku caawiso muddaad uurka leedahay, laga bilaabo qorshaynta inaad uur yeelato ilaa uurkaga iyo kadib markaad ilmo dhasho. Wadajir ahaan, waxaad ka wada shaqeyn doontiin safarkaaga joojinta.
Hada Waxaa Jirta Sabab Kale oo ay Tahay inaad isugu Dayayso Joojinta
Hada markaad isku dayeyso inaad joojiso tubaakada iyadoo ay ku caawinayaan tababarayaashayada Barnaamijka Uurka, waxaad xaq u yeelan kartaa kaarka hadiyadaha. Kaliya wac 1-800-QUIT-NOW si aad waxbadan u barato.